Seenaan Uummata Dagatamee Yaadatamaa JIra
Caamsaa 23, 2011
Uummata Gulla kanneen miliyoona walakkaatti hedamantu dugdee kutaalee Caroliana, Georgia fi Florida jechuunis kutaalee america gama kibbaa keessa jiraatu.
Kan hojii profeeserummaa irraa gadamoojja’an Dorothy Browner-Hubler hawaasa Gullah kan kutaa South Carolina jiruu fi ofii isaanii keessatti guddatan barsiisuuf jecha faarulee, dhiichisaa fi seenaawwan fakkii halluu adda addaa dibametti gargaaraman.
Dorothy-n akka jedhanitti uummati Gullah hidda dhalata Africa gama dhiyaa kanneen jaarraa 17ffaa fi 18ffaa keessa garbummaa dhaan gara Americatti fidhamanii dha.
Hedduun akka jedhanitti hawaasa lammiiwwan America hidda dhalata Africa irra jireessi uummata kana keessaa ti.
Nuti garee lammiiwwan America hiddha dhalata Africa keenneen eessaa akka dhufne beeknuu fi aadaa, seenaa, fi nyaata adaa keenyaa attamiin akka bilcheessan, amantiilee eeggannee jirru tokkicha. Kanas guutummaa addunyaatti beeksisuu feena.
Dhagaa gati jabeessi kam akka ta’e eessaa akka ba’u beekna, suphee irraa xuubii hojjechuutti beekamoo dha, halluu adda addaan fakkiiwwan miidheksuu fi akkaataa midhaan itti qotaniin beekamoo dha jedhan.
Namoonni hedduun seenaan uummata Gullah jechuunis gurraachota abbaa lafaa biyyattii duraanii kun eegamee dhaloota boriitti darbuu qaba isa jedhu irratti walii galaniiru.
Ameiikaa fi Uummata Ishee